Ziziphi izixhobo zokuthengisa onokuzicebisa ngazo uphando lwegama elingundoqo le-Amazon?
Ngaphambi kokuba ndibonise izixhobo ezintle kunye nezisebenzisekayo zophando lwegama elingundoqo lwe-Amazon, siqale ngoluhlu lolwazi. Ngelishwa, i-Amazon ayizange iveze nayiphi na imigaqo ethile okanye iimeko ezichongiweyo yi-A9 ye-algorithm ye-ranking - njengezixhobo ezinkulu zokukhangela, ezifana ne-Google, Yahoo, Bing, njl. Kodwa nantsi into esiyaziyo ngokuqinisekileyo. Ngokwezi vavanyo zentsholongwane zakutsha nje:
Ukulungiswa kwemigqaliselo yophando lwegama le-Amazon kubonakala kudlalwa kwakhona (ubuncinci). Kuthetha ukuba kufuneka wenze okusemandleni akho ukuphepha ukungafani / ubuninzi bezinto ezingafaniyo, okanye usebenzisa amacala angaphantsi / angaphezulu xa kunokwenzeka, ngokukodwa xa kuziwa kumazwi angemva.
Khawucinge ngomda wokukhawulelwa kwamanqaku angama-250 kwindleko epheleleyo yegama lakho elilandelayo. Ngokuqinisekileyo, akukho mqathango oqinileyo wokuqinisekiswa ngamagosa akwa-Amazon. Nangona kunjalo, ungcono kakhulu ukuhlala kwicala elikhuselekileyo kwaye uthathe le ngqalelo ingqalelo le meko.
Ukugcina oko engqondweni, lixesha lokukubonisa ezinye zeendlela zam ezivanyelweyo kwi-Amazon yegama elingundoqo. Nantsi imbonakalo emfutshane nganye ekufuneka isetyenziswe ngexesha lohlalutyo oluphangaleleyo lokuphanda. Zive ukhululeke ubuncinci ukuzama ezi. Kwaye ke, kukuphela kwakho ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi na oyithathayo ukulungiswa kohlu lwakho lwemveliso.
1. I-Eye elingundoqo elingamagama - kuyisityebi esihle ukukunceda nge-Amazon igama elingundoqo. I-keyword Eye ijongela kwisiseko sayo sedatha esiphezulu esithintela ngaphezu kwezigidi zezigidi ezikhethiweyo zegama eliphambili elixhaswe nemilinganiselo yokusesha ephakamileyo ukuba ubone ukuba ngubani na ongakwazi ukunqoba amagama okukhangela, kwaye mhlawumbi kufuneka uphelise njani uluhlu oluphambili lwegama eliphambili kunye nokudibanisa umsila.
2. I-Kparser - eli qonga le-intanethi linokukhawuleza ukufumana isethi sakho esisisiseko samagama akwii-key kunye nezicelo zokuthenga. Idatha idibene ndawonye ngokusekelwe kumanani ophando ekhompyutheni kunye neendlela zokuthenga ezithengiweyo nje kuphela kwi-Amazon ne-eBay, kodwa ukususela kwi-search yasekuqaleni nge-Google kunye ne-Bing. Into embi kuphela nge-Kparser kukuba ngelishwa le fomu yesofthiwe ye-intanethi inikezelwa phantsi kokufikelela okuhlawulwa kufumaneke isiseko sokuma.
3. Igama elingundoqo elithi Kiwi - lelinye ithuluzi elincomekayo lokuphanda ngegama le-Amazon, elixhamla ngokukhethekileyo ekufumaneni ukuqonda okujulileyo kweenjongo zabathengi bakho.Sebenzisa i-database yayo ebanzi eyenziwe ngedatha epheleleyo kubathengi bakho abajoliswe kuyo, iimfuno zayo eziphambili, kunye nemivo yokuthenga ngokubanzi-ihlanganiswe ngqo kwi-Amazon ngokwalo, kunye neendlela ze-Google zokuthenga, kunye neengxelo ze-YouTube.
4. I-Asin Key - yinqanaba lokugqibela lokuphanda ngegama eliphambili ndifuna ukukubonisa namhlanje. Phakathi kwamacala alo anamandla, le ncwadana yee-toolkit ine-intanethi ineentlobo ezininzi ezikhethiweyo zerhafu ezikhethiweyo ezilungiselelwe umgca wezixhobo ezahlukeneyo. Hlola amathuba ophando ngegama elingundoqo kunye nezi zikhokelo ezakhelwe ngaphakathi: I-Amazon Product Listing SEO ithuluzi, i-Keyword Tracker ephakamileyo, kunye neqhosha layo elichanekileyo lokusikisela.Qaphela, nangona kunjalo, ukuba i-Asin Key i-Amazon Keyword yophando iyakukusebenza kakuhle kuphela ukuba sele unesiseko esithile sokuqonda ngokuyisiseko kwe-SEO kunye nemigaqo ephambili ye-ecommerce search algorithm Source .